राजुको होमवर्क कसले गरिदियो ? - ग्लोबलपाटी
ग्लोबलपाटीप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख १८, शनिबार (६ महिना अघि)
⇒ क्यारोल मूर
राजुले आफ्नो होमवर्क कहिल्यै गर्दैनथ्यो । “कस्तो बोर लाग्छ ।” उसले भन्थ्यो । ऊ जहिले पनि खेलिरहन्थ्यो । उसका शिक्षकहरूले भन्नुहुन्थ्यो, “होमवर्क गरेनौ भने तिमीले केही पनि सिक्ने छैनौ ।” हुन पनि हो, उसलाई केही पनि आउँन्नथ्यो ।
राजुको मुठ्ठीमा परेको सानो ख्याक आत्तियो । उसले राजुसँग निहोरा गर्दै भन्यो, “मलाई त्यो बिरालोबाट जोगाऊ । तिमीले जे भन्छौ म मान्छु ।”
“मेरो सबै होमवर्क यही ख्याकबाट गराउन पाए त सन्चै हुन्थ्यो । होमवर्कमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउन पाए त जाँचमा पहिला हुने थिएँ ।” राजुले बिचार गर्यो । उसको जाँच आउन एक महिनाजति बाकी थियो । उसले ख्याकलाई भन्यो, “लौ मेरो सबै होमवर्क गरिदियौ भने म तिमीलाई छाडिदिन्छु ।”
राजुको कुरा सुनेर त्यो सानो ख्याक आत्तियो । उसले खुट्टा बजार्दै भन्यो, “हे भगवान ! कस्तो आपत आइलाग्यो । जे भए पनि बोलेको कुरा त पूरा गर्नैपर्यो ।”
बचनको पक्का त्यो सानो ख्याक राजुको होमवर्क गर्न कस्सियो । उसले राजुको किताब र नोटहरू पढ्न थाल्यो । एकछिन पढेपछि उसलाई समस्या पर्यो । किताबमा उसले नजानेका धेरै शब्दहरू थिए । उसले राजुसँग भन्यो, “तिम्रो होमवर्क त म गर्छु तर तिमीले मदत नगरी हुँदैन । किनभने मलाई कतिपय शब्द थाहा छैन । तिनको अर्थ तिमीले बताइदिनुपर्छ ।”
तर गणितको होमवर्क गर्ने बेलामा सानो ख्याकलाई ठूलै समस्या पर्यो । उसलाई सामान्य जोडघटाउ र गुणाभाग मात्रै आउँथ्यो । गणितका फर्मुुलाहरू उसलाई थाहै थिएन । उसले राजुसँग मदत माग्यो । “मेरो छेउमा बसेर मलाई गणित सिकाउ त । अलिअलि गाइड गर्यौ भने मैले टिपिहाल्छु ।” उसले भन्यो ।
इतिहासको होमवर्क गर्ने बेलामा त्यो सानो ख्याक साह्रै दिक्क भयो । किनकि उसलाई भूतप्रेतको इतिहासमात्रै थाहा थियो । मानिसको इतिहास कत्ति पनि थाहा थिएन । यसैले उसले राजुलाई पुस्तकालयमा गएर इतिहासका किताब ल्याउन लगायो । उसले भन्यो, “यी सबै किताब मैले मात्रै पढ्न सक्दिन । तिमीले पनि पढन सघाउनुपर्यो ।”
बालकविताः नानीको बानी
पानीको चमत्कार !